Somali_Getting Started with Kindergarten Registration
Bilaabida Iska Diiwaangelinta Kindergartenka
Ku soo dhawoow Kindergartenka! Tani waa waqti farxad u leh cunugaaga iyo qoyska. Diiwaangelinta kahor dhammaadka Juun waxay ku oggolaan doonta ku meelgaar nugul, oo waxaad ku baran doonta waxyaabo ku saabsan fursadaha waxbarasho ee xagaaga oo xiiso leh si ay u caawiyaan adiga iyo ilmahaaga in aad u diyaar garoowdaan Kindergartenka. Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan diiwaangelinta ama waxa aad u baahan tahay, ha welwelin! Hoos waxaa ku qoran macluumaad, iyo dugsi degmeedkuba waxay diyaar u yihiin inay caawiyaan adiga iyo qoyskaada.
Goormaan diiwaangeliya cunugayga? Sanadkan isdiiwaangelintu waxay bilaabanaysa Janaayo 16 keeda, 2018. Halkan ka riix waqtiyada caawinaada leh.
Waa maxay degmo dugsiyeedkeeyga? Haddii aadan garanay degmo dugsiyeedkaada, waxaad ka wici karta Qadka Caafimaadka Qoyska 1-800-322-2588. Turjibaano ayaa la heli kara, oo kaa caawin kara sidii aad ku heli lahayd degmo dugisyeedka cunugaadu uu ka dhigan doono kiindergartenka. Haddii aad dareentid in aadan ku jirin mid ka mid ah toddoba degmo ee Qariirada Wadooyinka (Auburn, Federal Way, Highline, Kent, Renton, Seattle, Tukwila), waa in aad weli la xiriirto degmada sida ugu dhaqsaha badan si aad u diiwaangeliso ilmahaaga.
Markii aad ogaato degmo dugsiyeedkaada waxaad soo booqan karta dugsiga hoose ee deriskaada, ama la xariiri karta xafiiska degmada adigoo soo booqanaya ama wacaya. Macluumaadka lagala xariiri karo degmo dugsiyeedka waxaa laga heli kara halkan: Macluumaadka Dugsi Degmeedka
Maxaan la iiga baahan yahay inaan keeno? Halkan riix si aad u aragto liiska macluumaad ku anfacaya ama dokumeentiga ka caawinaya inaad isdiiwaangeliso. Haddii aadan haysan qaar ka mid ah macluumaadkan, taasi waa okey. La xariir dugsigaaga ama degmada si aad u ogaato wixii kale ee ay aqbalayaan, ama sida lagu heli karo waxyaabaha aad u baahan tahay.
Filed Under: Somali